तपाइँको व्यवसायलाई मद्दत गर्न कसरी सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 6, 2014 सोमबार, अक्टोबर 6, 2014 Douglas Karr
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग, उपकरण, र विश्लेषण को जटिलता दिएर, यो एक प्राथमिक पोष्ट जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईं मात्र आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ Of 55% व्यवसायहरूले वास्तवमा व्यवसायको लागि सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दछ.
सामाजिक मिडियालाई क्रेजको रूपमा सोच्न यो सजिलो छ कि तपाईंको व्यवसायको कुनै मूल्य छैन। त्यहाँ सबै आवाज को साथ, धेरै व्यवसायले सामाजिक मिडियाको व्यापार शक्तिलाई कम महत्त्व दिँदैन, तर सामाजिक ट्वीट्स र बिरालो फोटो भन्दा धेरै धेरै छ: यो अब जहाँ ग्राहकहरु उत्पादनहरु र सामग्री खोज्न को लागी जान्छन्, अनुसरण र आफ्नो मनपर्ने ब्रान्डको साथ व्यस्त, भीडसोर्स रायहरु सिफारिश र रेफरलहरू प्राप्त गर्न, र उनीहरूको नेटवर्कको साथ सामग्री साझा गर्न। प्लेसेस्टर
बजारका लागि सामाजिक मिडिया उपयोग, एक महत्वपूर्ण % २% मार्केटरहरूले सोचे कि सामाजिक मिडिया महत्वपूर्ण छ तिनीहरूको व्यवसायको लागि, २०१ in मा% 86% बाट माथि सामाजिक मिडिया परीक्षकको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग उद्योग रिपोर्ट। कुल मिलाएर, आगामी years बर्षमा सोशल मिडिया बजेट दोब्बर हुने आशा गरिन्छ!
अचम्मको कुरा, हामी प्रत्येक ग्राहकलाई सामाजिक मिडियामा हाम फाल्ने गर्दैनौं। हामी यसैले गर्दैनौं किनकि हामी प्रायः फेला पार्दछौं कि उनीहरूसँग अनलाइन उपस्थितिको अर्को जग छैन। तिनीहरूसँग सजिलै नेभिगेट गरिएको एक अनुकूलित साइटको अभाव छ। तिनीहरूसँग नियमित कुराकानी गर्न ईमेल प्रोग्रामको अभाव छ। रूपान्तरणमा भेट्न ड्राइव गर्ने उनीहरूको क्षमताको अभाव छ। वा तिनीहरूसँग वेबसाइट भ्रमण गर्ने क्षमताको कमी छ उनीहरूको साइटको अनुसन्धान गर्न र उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी फेला पार्न।
सामाजिक मिडिया एक संचार माध्यम हो, केवल अर्को माध्यम तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरू प्रतिध्वनित गर्नका लागि। त्यहाँ दर्शकहरु बाट एक अपेक्षा छ कि तपाइँ उत्तरदायी, इमानदार, र सामाजिक मिडिया को माध्यम बाट उपयोगी हुन जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं त्यो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं सामाजिक मिडिया बिक्री, मार्केटिंग, प्रतिक्रिया, र तपाईंको पहुँच विस्तारको लागि एक टन लिन सक्नुहुनेछ। कम्पनीहरूले प्रायः सोच्दछन् कि फेसबुकमा कम्पनी पृष्ठ सुरू मात्रै सोशल मीडिया हो - तर त्यहाँ सामाजिक रणनीतिका धेरै तत्वहरू छन्:
भवन प्राधिकरण - यदि तपाइँ तपाइँको उद्योग मा मान्यता प्राप्त र सम्मान गर्न चाहानुहुन्छ, एक ठूलो सामाजिक मिडिया उपस्थिति महत्वपूर्ण छ।
सुन्दै - यो केवल सोशल मिडियामा तपाईसँग कुरा गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, यो उनीहरूको बारेमा बोल्दैछन् कि महत्वपूर्ण छ। A अनुगमन रणनीति तपाइँको बारेमा कुराकानीहरू फेला पार्न आवश्यक छ जुन तपाइँ ट्याग हुनुहुन्न साथ साथै तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादनहरू र सेवाहरूको समग्र भावना।
सञ्चार - आधारभूत लाग्दछ, तर सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले च्यानलहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ जहाँ मानिसहरूले सुन्ने छन्। यदि तपाइँसँग तपाइँको कम्पनी को बारे मा महत्वपूर्ण समाचार वा समर्थन मुद्दाहरु छन् भने, तपाइँको सामाजिक च्यानलहरु तपाइँको सार्वजनिक सम्बन्ध रणनीति कार्यान्वयन गर्न Goo गन्तव्य हो।
ग्राहक सेवा - चाहे तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँको सामाजिक मिडिया च्यानलहरु ग्राहक समर्थन को लागी हो फरक पर्दैन ... ती हुन्! र ती सार्वजनिक च्यानलहरू छन् त्यसैले ग्राहक सेवा मुद्दाहरूको द्रुत र सन्तोषजनक तरिकाले समाधान गर्ने तपाईंको क्षमताले तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरूलाई मद्दत गर्दछ।
छुट र विशेष - धेरै व्यक्ति साइन अप गर्नेछन् यदि तिनीहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ विशेष प्रस्तावहरू, छुट, कुपन र अन्य बचतहरूको लागि अवसरहरू हुन गइरहेको छ।
मानवता - ब्रान्डहरू, लोगोहरू र नाराले ब्राण्डको मुटुमा बढ्ता अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दैन, तर तपाईंको मान्छेहरू गर्छन्! तपाईंको सामाजिक मिडिया उपस्थिति तपाईंको अनुयायीहरूलाई ब्रान्ड पछाडि मान्छेहरू हेर्न अवसर प्रदान गर्दछ। यसको प्रयोग गर!
मान थप्नुहोस् - तपाईंको सामाजिक अपडेटहरू सधैं तपाईं बारे मा हुनु हुँदैन! वास्तवमा, ती सायद तपाइँको बारेमा हुनु हुँदैन। कसरी तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई मान थप्न सक्नुहुन्छ। सायद त्यहाँ कुनै समाचार वा अर्को साइटमा लेख छ जुन तपाईंको ग्राहकहरूले प्रशंसा गर्नेछ ... यसलाई साझा गर्नुहोस्!
बाट यो इन्फोग्राफिक प्लेसेस्टर ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, गुगल + र अन्य सामाजिक प्लेटफर्ममा संलग्नता सुरू गर्न खोजिरहेका व्यापारहरूको लागि केहि ठोस सल्लाह प्रदान गर्दछ। इन्फोग्राफिकले प्रयोगकर्ताहरूलाई केहि आधारभूत संसाधन अपेक्षाहरू, तपाईंको प्रोफाइल पृष्ठहरू सेट अप, र कसरी तपाईंको संचार रणनीति विकास गर्ने भनेर चलाउँदछ ताकि तपाईं स्प्यामर जस्तो नबोल्नुहोस्!
टैग: सामाजिक मिडिया प्रोफाइल बनाउनुहोस्एक सामाजिक मिडिया रणनीति विकास गर्नुहोस्कति फेसबुक अपडेटसामाजिक मिडियामा कति घण्टाकति सामाजिक मिडिया अपडेटकति ट्विटर अपडेटकसरीकसरी सोशल मिडिया प्रयोग गर्नेप्लेसटरसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङसामाजिक मिडिया प्रोफाइल सल्लाह
आजको अनलाइन संसारमा सामाजिक मिडिया लगभग आवश्यकता हो। यदि अरू केहि छैन भने राम्रोसँग चलेको सामाजिक मिडिया प्रोफाइलले तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको लागि विश्वसनीयता र विश्वास निर्माण गर्दछ। त्यहाँ धेरै साइटहरू छन्, किनमेलकर्ताहरू आफूले खरीद गरेको कम्पनीलाई विश्वास गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्। यदि तपाईंसँग फलोअरहरू र क्वालिटी अपडेटहरूको साथ बलियो सोशल मीडिया प्रोफाईल छ भने यसले तपाईंको आगन्तुकहरूको लागि तत्काल विश्वसनीयता निर्माण गर्दछ।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०8 बिहान
उत्कृष्ट पोष्ट टेक्नोलोजी त्यस्तो विस्तारमा पुगेको छ कि, उत्पादकहरूले सजिलैसँग उपभोक्ताहरूसँग विगतको तुलनामा सजिलो र छिटो तरिकामा संवाद गर्न सक्छन्। कुशल मिडिया र प्रभावकारिताका साथ मानिसहरुसम्म पुग्न सोशल मिडियाले प्रमुख भूमिका खेल्छ। तपाईंको सूचीमा थप्नको लागि, सबै सामाजिक मिडिया साइटहरूमा छविहरू, प्रोफाइल चित्रहरू, र codes्ग कोडहरू, र सूचनाहरूको सर्तमा एकरूप हुन राम्रो हुन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई महसुस गराउँदछ कि तिनीहरू सही ठाउँमा छन् र छाप छोड्दछ र तपाईंको ब्रान्ड पहिचान बनाउन सक्दछ। बाडेको मा धन्यवाद।
मई 30, 2016 मा 9: 19 एएम
जानकारी को लागी धन्यवाद। सामाजिक मिडिया धेरै कम्पनीहरू र विशेष गरी आजका एजेन्सीहरूको लागि अपूरणीय छ। B2C कम्पनीहरु आफ्नो अक्सर युवा लक्षित दर्शकहरु मा पुग्न र छिटो र प्रभावकारी संलग्न मा निर्भर छन्। बफर, Hootsuite र Socialhub.io जस्तै उपकरणहरू यसको लागि एक आवश्यकता हो। विज्ञापनको अर्को पुस्ता कुराकानी हो र प्राविधिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसलाई अँगाल्न यसले महत्त्वपूर्ण बृद्धि गर्न सक्दछ।